Hesho si fiican u xakamee oo u wanaaji nabadgelyada ganacsiga nidaamyo xakameyn marin lagu kalsoonaan karo-News-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Hesho xakameyn wanaagsan oo kor u qaado nabadgelyada ganacsiga nidaamyo xakameyn marin lagu kalsoonaan karo leh
Waqtiga: 2021-04-08 Hits: 5
1. Faa'iidooyinka la iska indhatiray ee nidaamka xakamaynta marin u helka
Iyadoo aan la helin nidaamyo xakamaynta helitaanka ganacsiga oo habboon, waxaad uga tagi kartaa shaqaalahaaga iyo ganacsigaaga kuwo ballaadhan oo u furan arrimo badan sida burburka hantida, luminta hantida, xatooyada ama jebinta, iyo falal dambiyeedyo kale oo u horseedi kara dhibaato aan laga soo kaban karin ururkaaga.
2. Awoodda nidaamka xakamaynta
siinta marin deg deg ah shaqaalaha; kartida la siinayo xuquuqda soo gelida aag cayiman dad kooban; difaac la isku halleyn karo oo ku saabsan gelitaanka aan la fasaxin, sidaas darteed nidaamka ayaa ka digaya inuu dhex galo ogolaansho la'aan.
Way iska cadahay in adeegsiga aaladahaas oo kale runti ay yareeyaan halista duulaanka sharci darada ah ee goobaha xiran. Laakiin kani waa cirifka kaliya ee barafka maxaa yeelay, dhab ahaantii, waxaad heshay xitaa faa'iidooyin aan la inkiri karin, oo ay ku jiraan falanqaynta Ganacsiga. Nidaamka xakamaynta marin u helka oo ay weheliso shaqooyinka waqtiga xaadiritaanka iyo hagaajinta dhaqdhaqaaqa waxay noqon karaan nidaam raadraac dhab ah oo lagu sameeyo falanqeyn Nidaamka casriga ah wuxuu u oggol yahay u qoondeynta jadwal shaqo oo gaar ah shaqaale kasta maaraynta waqtiga ugu fudud.
3. Maxaan qaban karnaa
Waxaan ku takhasusay warshadaha badhanka nidaamka xakamaynta helitaanka leh tayo sare iyo qiime tartan leh. Haddii aad dano leedahay fadlan si xor ah ila soo xiriir!
Bixiye xalka xakamaynta helitaanka
Hore: Genmega releases UV light sanitiser for ATM keypads
Xiga: Xianglong handset cas oo loo isticmaalay taleefanka gurmadka ee USA